တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားမီဒီယာ အခန်းကဏ္ဍ ဆွေးနွေးမည် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
စနေနေ့၊ ဧပြီလ 20 ရက် 2013 ခုနှစ် ကေအိုင်စီ သတင်း – ကေအိုင်စီ
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့ရှိ စထရင်းဟိုတယ်တွင် ဧပြီလ ၂၅ရက်နေ့မှ ၂၇ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည့် တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာ ခံတွင် လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် တိုင်းရင်းသားမီဒီယာများ ပါဝင်ရမည့် အခန်းကဏ္ဍ ဆွေးနွေးသွားရန် ရှိသည် ဟု သိရသည်။
“အခုတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေ မီဒီယာတွေက လက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ အခြေအနေကို ပဲ ဖော်ပြတာ များတယ်။ တိုင်းရင်းသားမီဒီယာတွေအနေနဲ့ လက်နက်ကိုင်ကိစ္စအပြင်ပြည်သူလူထုတွေ ရဲ့အသံ၊ စားဝတ်နေရေးနဲ့ အခွင့်အ ရေး ချိုးဖောက်ခံရမှု စသဖြင့် အများသိအောင် ဖော်ပြပေးနိုင်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ အများကြီး အထောက်အကူ ပြုမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ညီလာခံမှာ ဆွေးနွေးသွားမယ်”ဟု ညီလာခံ ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ကိုကြည်ဇော်လွင် ကေအိုင်စီသို့ ပြော သည်။
ညီလာခံကို နိုင်ငံတကာမြန်မာ့သတင်း(BNI)မှ ဦးဆောင်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် အပါအ၀င် ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီးများ၊ အစိုးရပြန်ကြားဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ နိုင်ငံတကာမီဒီယာကျွမ်း ကျင်သူများ၊ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များမှတိုင်းရင်းသားမီဒီယာ ကိုယ်စား လှယ်များ စသည့်လူဦးရေပေါင်း ၉၀ကျော်ကို ဖိတ်ကြား ထားသည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခေတ်စနစ် ပွင့်လင်းလွတ်လပ်လာသည်နှင့်အမျှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ အသံများ ပိုမို အားကောင်းစေရန် ရည်ရွယ်၍ BNI မှ ပြည်တွင်းတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် တိုင်းရင်းသားမီဒီယာများ ညီလာခံ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် စီစဉ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကိုကြည်ဇော်လွင်က ဆက်ပြောသည်။
BNI ကို ၂၀၀၃ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလက ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကာ နယ်စပ်အခြေစိုက် တိုင်းရင်းသား မီဒီယာများဖြစ် သည့် ကချင်၊ ကရင်နီ(ကယား)၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ သျှမ်း အပါအ၀င် သတင်းမီဒီယာ ၁၁ဖွဲ့ပါဝင်သည့် မီဒီယာကွန်ယက် တခု ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ Hobson Choice အစီရင်ခံစာနှင့် ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက မြန်မာငြိမ်းချမ်း ရေးပုံဖော်ခြင်း (Deciphering Myanmar’s Peace Process) အမည်ရှိ ကိုးကားစာအုပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
This entry was posted on April 22, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဖယ်ဒရယ်နှင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ
နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဝင် ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စေရန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ကိုပြင်ဆင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ပြောကြား →